အခက္အခဲ တခုေတြ႕ရင္ ေနာက္လွည့္ အရႈံးေပးခ်င္တဲ့သူေတြ အတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစမယ့္ စကားေလး နဲ႔ အားေပးစကားဆို လိုက္တဲ့ နီနီခင္ေဇာ္ – Let Pan Daily
အသံပါဝါအားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ သီခ်င္းေတြကို သီဆိုတတ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ နီနီခင္ေဇာ္ကေတာ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္အဆိုေတာ္ေတြထဲကတစ္ေယာက္အပါအဝင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕သီခ်င္းေတြကေတာ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ပါးစပ္ဖ်ားမွာေရပန္းစားေနရာယူထားၿပီး ေတးစီးရီးအယ္ဘမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုလည္း ထြက္ရွိေအာင္ျမင္ ထားပါတယ္။ လတ္တေလာ မွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ သီခ်င္းေတြကိုနားေထာင္လို႔ရေအာင္ Stay @ Home & Sing with me ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ေလးတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
သူမကေတာ့ အဆိုပါအစီအစဥ္ ေလးကေနရရွိခဲ့တဲ့ အႏုပညာေၾကးထဲကမွ Covid 19 ကာလမွာသုံးဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကိုေထာက္ပံ့လႉဒါန္းေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ နီနီခင္ေဇာ္က အခက္အခဲတခုေတြ႕ရင္ ေနာက္လွည့္အရႈံးေပးခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစမယ့္ စကားေလးနဲ႔ အားေပး စကားဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းေလးကိုေတာ့ နီနီခင္ေဇာ္က “အခက္အခဲတခုေတြ႕လို႔ ေနာက္လွည့္အ ရႈံးေပးခ်င္ၿပီ ပတ္ဝန္းက်င္က ကိုယ့္က်ရႈံးမႉေတြအတြက္ကဲ့ရဲ႕ေဝဖန္ေနၿပီဆိုရင္ ဒီလိုအေျခအေနေတြႀကဳံဖို႔ ကိုယ္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရတဲ့ေျခ လွမ္းတလွမ္းတိုင္းစီ ျပန္ၾကည့္ေရတြက္လိုက္ပါ
ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲခဲ့လဲဆိုတာ ကိုယ္ကိုတိုင္ ကလြဲမသိႏိုင္ဘူး…….(Sing with me ကိုအားေပးခဲ့ၾကတဲ့ တဦးခ်င္းဆီေက်းဇူးတင္ရင္း ပါဝင္ ေပးၾကတဲ့ Tay , Lucky Hand Band ,DM4 ေက်းဇူးတင္ရင္း အနီေရာင္ဖီးနစ္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားရပါဦးမယ္)ဆိုၿပီး သူမရဲ႕လူမႈကြန္ရက္မွာ ေရးသားေဖာ္ျပ ထားခဲ့ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးေရ အခက္အခဲ တခုေတြ႕ရင္ ေနာက္လွည့္အရႈံးမေပးဘဲ ဒီလိုအေျခအေနေတြႀကဳံဖို႔ ကိုယ္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရတဲ့ေျခလွမ္းတလွမ္းတိုင္းစီတိုင္းကို ျပန္ေရတြက္ၾကည့္ကာ အားတင္ထားလိုက္ရေအာင္ေနာ္..။
အခက်အခဲ တခုတွေ့ရင် နောက်လှည့် အရှုံးပေးချင်တဲ့သူတွေ အတွက် ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် စကားလေး နဲ့ အားပေးစကားဆို လိုက်တဲ့ နီနီခင်ဇော်
အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နီနီခင်ဇော်ကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော်အဆိုတော်တွေထဲကတစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သီချင်းတွေကတော့ လူငယ်တွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းစားနေရာယူထားပြီး တေးစီးရီးအယ်ဘမ်ပေါင်းများစွာ ကိုလည်း ထွက်ရှိအောင်မြင် ထားပါတယ်။ လတ်တလော မှာတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် သီချင်းတွေကိုနားထောင်လို့ရအောင် Stay @ Home & Sing with me ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့ အဆိုပါအစီအစဉ် လေးကနေရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာကြေးထဲကမှ Covid 19 ကာလမှာသုံးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ နီနီခင်ဇော်က အခက်အခဲတခုတွေ့ရင် နောက်လှည့်အရှုံးပေးချင်တဲ့သူတွေအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် စကားလေးနဲ့ အားပေး စကားဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ နီနီခင်ဇော်က “အခက်အခဲတခုတွေ့လို့ နောက်လှည့်အ ရှုံးပေးချင်ပြီ ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ့်ကျရှုံးမှူတွေအတွက်ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်နေပြီဆိုရင် ဒီလိုအခြေအနေတွေကြုံဖို့ ကိုယ်လျှောက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့ခြေ လှမ်းတလှမ်းတိုင်းစီ ပြန်ကြည့်ရေတွက်လိုက်ပါ
ဘယ်လောက်ခက်ခဲခဲ့လဲဆိုတာ ကိုယ်ကိုတိုင် ကလွဲမသိနိုင်ဘူး…….(Sing with me ကိုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ တဦးချင်းဆီကျေးဇူးတင်ရင်း ပါဝင် ပေးကြတဲ့ Tay , Lucky Hand Band ,DM4 ကျေးဇူးတင်ရင်း အနီရောင်ဖီးနစ် ဆက်လက်ကြိုးစားရပါဦးမယ်)ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးသားဖော်ပြ ထားခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ အခက်အခဲ တခုတွေ့ရင် နောက်လှည့်အရှုံးမပေးဘဲ ဒီလိုအခြေအနေတွေကြုံဖို့ ကိုယ်လျှောက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့ခြေလှမ်းတလှမ်းတိုင်းစီတိုင်းကို ပြန်ရေတွက်ကြည့်ကာ အားတင်ထားလိုက်ရအောင်နော်..။
နေရောင်အထိခံလို့မရအောင် အရေပြားရောဂါခံစားနေရတာတောင် လမ်းပေါ်ထွက်င်္ပြီးတော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သက်မွန်မြင့် ရဲ့ အကြောင်း
မိမိုက်လွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှပေါ်လွင် လွန်းနေတဲ့ ဆွေဇင်ထက်
ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ ကောက်ကြောင်း အလှပေါ်လွင်အောင် ပို့စ်ပေးကြမ်းနေတဲ့ နေခြည်ဦး ရဲ့ ဗီဒီယို
ပုရိသတွေ နှစ်ခါ ပြန် ကြည့် ချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်မူ ရှိ တဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ ဗီဒီယို